HomeTURKEYGobolka Marmara34 IstanbulKu dhammeynta qaddarka aaladda Pointstanbukart Qalabka Feejignaanta ee Adeegga
17 / 01 / 2020 34 Istanbul, tareenka, Tariin, GUUD, WADADA, KENTİÇİ Systems Rail, Nidaamyada Tire Wheels, Headline, Gobolka Marmara, Metro, Metrobus, TURKEY, taraamka
Ku dhammee safka adoo adeegsanaya qalabka isweydaarsiga mobilada istanbukart
Si loo yareeyo cufnaanta abuuraya safka waqti ka waqti xarumaha xarumahab eeb ee "b ", IMM waxay gelisaa İşlem Mobile Trading Point araç qalab. Xarunta codsi ee wareega, oo markii ugu horaysay laga hirgaliyay magaalada Üsküdar, waxay adeegtaa celcelis ahaan 120 qof maalintii.
Dowladda Hoose ee Magaaladda Istanbul waxay soo saartay codsi cusub oo lagu dhimayo cufnaanta xarumaha Istanbulbulkart oo ay deggan yihiin dadka reer Istanbul, kuwaas oo ka faa iideysanaya dhimis iyo gaadiidka dadweynaha oo lacag la’aan ah. Qalabka 'Meel Isweydaarsiga Mobilada' ee la geliyey adeegga, dhammaan khasaaraha, dib u cusboonaysiinta iyo iibsiga ugu horreeya ee laga helo xarumaha codsi ee jira ayaa la samayn karaa.
Marxaladi hore, 'Mobile Transaction Point', oo laga hirgaliyay magaalada Üsküdar, ayaa maalin walba u adeegta 120 qof oo leh hal sanduuq sanduuq. Dhamaadka bisha Janaayo, gawaarida cusub ee guurguura oo wata laba waardiyeyaal ayaa la qorsheynayaa in la qoro. Sidaas darteed, ka sokow xarumaha codsashada ee Istanbulbulkart, waxaa loo qorsheeyay in ay adeegyo siiso 2 kun oo qof bil kasta.
Iyada oo ay kordhayso tirada gawaarida xawaaladda, dhammaan adeegyada la xiriira fiisaha, wareejinta isu-dheellitirka, dalabka, dib-u-cusboonaysiinta iyo macaamil-xarooyinka laga sameeyo xarumaha codsi ee Istanbulbulkart waxaa loo gaarsiin doonaa meel kasta oo moobiil Istanbul ah.
Marka lagu daro tagista Xarumaha Kaararka Istanbul ee fiisayaasha, dadka daggan Istanbul ayaa iyaguna ahhttps://www.istanbulkart.istanbul). Sidan, waa suurtagal in laga fogaado cufnaanta xarumaha kaararka Istanbul.
Nidaamka Dembiga ee Lagu Helo Kursiga Curyaanka Tikidhada ee Bixinta Aan Cadeyn
PTT Gaadiidka Gawaarida Jidka
Ogeysiiska Qandaraaska: Gargaarka Gawaarida Gawaarida ee Gargaarka Ulukisla Gar
Ogeysiiska Qandaraaska: Goobta Goobta Goobta Dhismaha Gaadiidka Gaadiidka Gaadiidka
Ogeysiiska Qandaraaska: Nidaamka Korjoogteynta iyo Dib-u-hagaajinta Nidaamka Isku-xirka Gaadiidka
Gawaarida Nidaamka Raadinta Gawaarida Dönerköprü Mashruuca Turnkey Turnkey…
Olympos Teleferik waxay noqotay goobtii booqashada ee wafdiyada kale
Ramadan in dhibic ugu sareeya Turkiga
İstanbukart Mobile Trading Point
Xarumaha Kaararka Istanbul
Xarunta Codsiga İstanbulkart